CAFFEE – (19/06/2011) Gabaasa Raawwii Karoora Hojiiwwan Gurguddoo Walakkaa Waggaa Bara 2011Qaama Raawwachiisaa Pireezidaantiin MNO Caffeef dhiyeessan keessaa cuunfamee kan fudhatame
Misooma ariifataa fayyadamummaa uummataa irratti hundaa’eefi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf karoorri bara 2011 Caffeen ragga’ee hojiirra kan oole ta’uu Pireezidaantiin MNO Kab. Obbo Lammaa Magarsaa gabaasa walakkaa waggaa Caffeef dhiyeessan keessatti ibsan.
Uummanni Oromoo hirmaannaafi fayyadamummaan siyaas-diinagdee haqa qabeessa ta’e biyyattii keessatti akka mirkanaa’uuf qabsoo dheeraafi wareegama hedduu kaffaleen jijjiiramni seena qabeessa ta’e galmaa’ee jira. Waggoottan sadan darbaniin asitti mootummaan riifoormiiwwan adda addaa taasisu cinaatti, nagaafi olaantummaa seeraa naannicha keessatti mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa karaa bilchina qabuun hojjetamaa turuusaa gabaasi dhiyaate ibsee jira.
Haa ta’u malee, kaayyoon diinota keenyaa Oromoofi Oromiyaatti diina baay’isuu, gama biraan immoo, Oromoodhaan Oromoo cabsuuf maallaqaafi hidhannoo meeshaaleen waraanaas osoo hin hafiin walirratti nu ijaaruun rakkoo uumuudha. Ta’us, obsaafi bilchinaan uummata of cinaa hiriirsuun gara qabsoo nagaatti fiduuf hojii guddaan hojjetamaa turuu ibsan.
Guddina diinagdee biyyaafi naannoo keessatti misoomni qonnaa utubaa ce’uumsa industiriiti kan jedhan Pirezidaantiin MNO Kab. Ob. Lammaan, tarsiimoo oomishaafi oomishtummaa qonnaa guddisan hawaasa biraan gahuuf sirna eksteenshinii qonnaa hojiirra oolchuuf hojiin bal’aan hojjetamaa tureera. Keessattuu, oomisha midhaanii galtee industirii ta’aniifi mala qonnaa ammayya’aafi teknoloojii qonnaa beekumsa irratti hundaa’e babal’isuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan ture ta'uu ibsan. Haa ta'u malee, wabii nyaataa mirkaneessuuf , teknoloojii qonnaa bu’a qabeessummaan isaanii mirkanaa’e karaa guutuu ta’eefi gahumsa qabuun itti fayyadamuu irratti qaawwaan jiru bal’aa ta’uun waan hubatameef fuula duratti rakkoo kana furuuf tumsa qooda fudhattootaa barbaada jedhan.
Jiruufi jireenya hawaasa naannoo horsiise bulaa jijjiiruuf hojiiwwan misooma lafa dheedumsaa, dhiyeessii bishaan dhugaatii namaafi beeyladaa, misooma qonna midhaan gammoojjii, kunuunsaafi fooyyessa sanyii beeyladaa irratti hojiin bal’aan hojjetamaa tureera. Misooma agro-industirii xixiqqaa hanga gurguddaa keessatti hirmaachuun oomisha dheedhii irratti sona dabaluu, oomisha industirii gabaan barbaaduuf dhiyeessuufi qulqullina oomisha qonnaa dabaluufis hojiin mekaanaayizeeshinii waldaalee cimuu qaba jedhaniiru.
Dhiyeessiifi waliin gahiinsa bishaan dhugaatii qulqulluu xumura bara 2010tti %63.8 irra ture bara kana %69.5 irraan gahuuf karoorfamee jiru keessaa hanga xumuura kur. 2ffaatti %64.5 irraan kan gahame ta’uu ibsan. Carraa invastimantii naannoon keenya qabduufi dhangala’iinsa invastimantii dabalaa jiru irraa fayyadamaa ta’uuf, ji’oottan jahan darban keessatti piroojeektota 22 simachuun lafti heek.259.1 akka kennamuuf murtaa’eera.
Kana cinaatti immoo, hordoffiifi to’annoo piroojeektota invastimantii hojiirra jiran irratti taasifameen abbootii qabeenyaa deeggarsi taasifameefi fooyya’uu hin dandeenye waliigalteen isaanii addaan citee lafti heek. 155.4 istookii mootummaatti akka deebi’u kan taasifame ta’uu ibsan.
Misooma barnootaa babal’isuuf, manneen barnootaa 16,234 keessatti barattoota idileefi idilee duraa mil.9.6 (87.5) carraa barnootaa argatan keessaa, barattoonni mil.4.3 (%45.1) ta’an dubartootadha.
Gama tajaajila fayyaatiin, tajaajila dahumsaa haadholeef kennuu, du’aatii daa’immanii hir’isuu, saaxilamummaa HIV/AIDSn mul’achaa jiru xiqqeessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Sassaabbii galiin walqabatee, ji’oottan jahan darban keessatti galii Qar. Bil. 9.2 sassaabuuf karoorfamee Qar. Bil. 9.5 (%102.7) sassaabuun danda’ameera.
Akka waliigalaatti, raawwiin hojii walakkaa waggaa bara kanaa sektaraa sekataratti garaagarummaa yoo qabaates, haala qabatamaa naannoon keenya keessa tureen hojiiwwan hundi duguugamanii hojjetamuu baatanis, yeroo hafe keessatti maallaqa, humna namaafi beekumsa qabnu qindeessinee socho'uun gaaffii uummata keenyaa deebisuuf cimnee ni hojjenna jedhanii jiru. Tumsa kana keessattis, hordoffiifi deeggarsi Caffee kanaa kan isaan barbaachisu ta’uu dhaamuun gabaasa dhiyeessan xumuuranii jiru.
Toorbee kana 4244
Ji'a kana 12220
2008 irraa eggalee 3783200